Izindaba - Izintengo zebhethri zehlisiwe muva nje
Umhlaba wonke ngowenzuzo;umhlaba uyaphithizela, konke kungenxa yenzuzo.”
Ngakolunye uhlangothi, amandla elanga awapheli.Ngakolunye uhlangothi, inqubo yokukhiqiza amandla elanga inobungani bemvelo futhi ayinakho ukungcola.Ngakho, ukukhiqizwa kwamandla e-photovoltaic kungenye yezindlela ezikahle zokukhiqiza amandla esikhathini esizayo.
Noma yiluphi uhlobo lwendlela yokukhiqiza amandla yokukala noma imbala ibe inkambiso, kuyodingeka ixhunywe ku-inthanethi.
Kodwa-ke, iziteshi zamandla ngeke zenze ibhizinisi lokulahlekelwa, ukukhiqizwa kwamandla kagesi we-photovoltaic akukwazi ukuthembela ekuxhasweni kukahulumeni "ku-inthanethi", ukunciphisa izindleko zabo kuyisihluthulelo.
Ngomhla zingama-30 kuNovemba, amasheya e-Longji alungisa ikhotheshini esemthethweni ye-monocrystalline silicon wafer, futhi intengo yosayizi ngamunye we-silicon wafer yehla ngo-0.41 yuan yaya ku- ~0.67 yuan / tablet, yehle isuka ku-7.2% yaya ku-9.8%.
Ngomhla zi-2 kuZibandlela, amasheya Amaphakathi amemezele ukuthi intengo yesinkwa se-silicon yehliswe ngokuphelele,
Intengo yosayizi ngamunye we-silicon wafer yehliswe ngo-0.52 yuan yaya ku-0.72 yuan / ucezu, noma ngo-6.04% yaya ku-12.48%.
Ukwehliswa kwentengo ye-silicon wafer kubangele umjikelezo omusha wengxoxo nge-photovoltaic logic.I-Flying Whale ilapha ukuze ihlele kabusha uchungechunge lwemboni ye-photovoltaic kanye namabhizinisi ahlobene, kanye nokuthola isiqondiso sesikhathi esizayo kanye nengqondo ye-photovoltaic yakho.
I-Photovoltaic, okungukuthi, i-photoraw volt.I-Photovoltaic power generation ibhekisela endleleni entsha yokukhiqiza amandla ukuguqula amandla elanga abe amandla kagesi.Isici esiyinhloko salobu buchwepheshe amaseli elanga.Amaseli elanga enza indawo enkulu yamamojula weseli yelanga, futhi ekugcineni abambisane nesilawuli samandla ukuze enze amadivaysi okukhiqiza amandla e-photovoltaic.
Phezulu kochungechunge lwemboni ye-photovoltaic abakhiqizi bemishini ye-silicon wafer.
I-crystal silicon, i-amorphous silicon, i-GaAs, i-InP, njll., ingasetshenziswa njengezinto zamaseli elanga.
I-Crystal silicon photovoltaic power generation okwamanje iyindlela evamile kakhulu yokukhiqiza amandla elanga, i-crystal silicon ihlanganisa i-polysilicon ne-silicon ye-monocrystalline.I-Monocrystalline silicon ibhethri yokuguqulwa kwebhethri nokusebenza kahle nokuzinza, kodwa izindleko eziphezulu;Ibhethri ye-polysilicon inenani eliphansi, kodwa ukuguqulwa okungalungile kahle.
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe be-silicon ye-monocrystalline, isabelo semakethe se-silicon ye-monocrystalline sedlule ama-90% ngo-2020, sibona ukushintshwa okwengeziwe kwe-polysilicon emakethe ye-silicon wafer.
Iziqu zemboni ye-polysilicon ziphezulu, namabhizinisi ahamba phambili ahlanganisa i-GCL-Poly, i-Tongwei Yongxiang, i-Xintai Energy, i-Xinjiang Daquan ne-Oriental Hope.Imboni ye-monocrystalline silicon inikeza iphethini yokuncintisana ye-oligarchy ephindwe kabili, kanti amabhizinisi ahamba phambili yi-Longji Shares kanye ne-Zhonghuan Shares. .
Ukufinyelela okuphakathi kwe-photovoltaic industry chain ikakhulukazi amaseli elanga kanye nabakhiqizi bemojula ye-photovoltaic.
Amaseli e-Photovoltaic ahlukaniswe kakhulu abe amaseli e-silicon e-crystalline namaseli efilimu encane.Amaseli efilimu amancane ayisizukulwane sesibili samaseli elanga, anezinto ezisetshenziswayo ezincane nezindleko eziphansi, kodwa okwamanje kusekhona igebe elikhulu ngesizukulwane sokuqala se-crystalline silicon solar. amaseli mayelana nokusebenza kahle kokuguqulwa.
Amaseli e-Crystal silicon angamaseli e-photovoltaic ajwayelekile, futhi amaseli amafilimu amancane asebenza njengesengezo esibalulekile kumaseli e-photovoltaic.
Ngo-2019, ekwakhiweni kokukhiqizwa kwamangqamuzana elanga emhlabeni wonke, amaseli e-silicon e-crystalline abalelwa ku-95.37%, namaseli amafilimu amancane abalelwa ku-4.63%.
Phakathi kwamabhethri efilimu emincane, ukusebenza kahle kokuguqulwa kwebhethri yefilimu encane ye-CIGS kuthuthuke ngokushesha eminyakeni yamuva.Amabhizinisi aseShayina abandakanyeka kubhethri yefilimu elincanyana ye-CIGS ahlanganisa i-Hanergy, i-China Building Materials Kaisheng Technology, i-Shenhua ne-Jinjiang Group.
Uma kuqhathaniswa nomfula okhuphukayo, iphethini yokuncintisana yemakethe yamaseli e-photovoltaic ihlakazekile. Ngo-2019, amadolobha amahlanu aphezulu embonini abalelwa ku-27.4%, phakathi kwawo amasheya e-Tongwei abe nesabelo semakethe yomhlaba wonke esingu-10.1%, okuyenza ibe i-photovoltaic enkulu kunazo zonke emhlabeni. umenzi weseli.
Imojula ye-Photovoltaic ehamba phambili inezabelo ze-Jinko, JA kanye ne-Longji.Eminyakeni yakamuva, isabelo semakethe samamojula we-photovoltaic siye sasheshisa kumabhizinisi ahamba phambili, futhi izinzuzo zomkhiqizo kanye nezindleko zokuhlanganisa zivelele.
Kusukela ngo-2011 kuya ku-2020, umthamo omusha we-photovoltaic ofakwe e-China nasemhlabeni waqhubeka nokukhula.Kulindeleke ukuthi amandla amasha e-photovoltaic afakwe emhlabeni wonke azofinyelela ku-300GW ngo-2025. Umthamo omusha we-photovoltaic waseShayina ofakiwe uzothatha u-35% wengxenye yomhlaba wonke, nezinga lokukhula elihlanganisiwe lonyaka elingaphansi kancane kunesilinganiso somhlaba wonke.
I-Bloomberg (i-Bloomberg) ibike ukuthi izintengo zamaphaneli elanga seziqalile ukwehla kulo nyaka, kanti i-China ikhansele cishe ama-megawatts angama-20 womthamo welanga wasekhaya kule nyanga.
Umphumela uba ukugcwala emhlabeni wonke, futhi amanani manje ehla ngokushesha.
I-China, imakethe yelanga enkulu kunazo zonke emhlabeni, imise amaphrojekthi amasha anamandla alingana nezizinda zokuphehla amandla enuzi ezingama-20.
Lena imakethe yomthengi ngenxa yokugcwala ngokweqile komhlaba wonke kwamaphaneli elanga, kuyilapho onjiniyela bakwamanye amazwe bebambezela ukuthenga, balinde amanani aphansi.
Isilinganiso senani lentengo yamamojula e-polysilicon yehle ngo-4.79% kusukela ngoMeyi 30, lehla ngoLwesithathu laya kwirekhodi eliphansi lamasenti angu-27.8 watt, ngokusho kwe-PVIsights.
Kungaba ukwehla okukhulu kwanyanga zonke kusukela ngoZibandlela wezi-2016, okokugcina imboni ibhekana nokugcwala ngokweqile komhlaba.
I-China ikhiqiza u-70% wamamojula welanga emhlabeni.
Isikhathi sokuthumela: Dec-20-2021